ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် သုံးသပ်ဖို့ သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးမယ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် သုံးသပ်ဖို့ သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးမယ်
ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် သုံးသပ်ဖို့ သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးမယ်
ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် နှောင့်နှေးနေတဲ့အပိုင်းတွေကို သုံးသပ်ပြင်ဆင်ဖို့ အစိုးရ၊နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့ ၈ ခုတို့ သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးကြမယ်လို့ အပစ်ရပ်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးက ပြောပါတယ်။
အခုလကုန်ပိုင်းမှာ ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပြီး အစုအဖွဲ့အားလုံးသဘောတူတဲ့ အချက်တွေကို ရွေးထုတ်စုစည်းသွားမှာဖြစ်တယ်၊ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲ ကော်မတီ(UPDJC)အစည်းအဝေးလည်း ဆက်တိုက်ကျင်းပပြုလုပ်သွားဖို့ ရှိတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
အစိုးရက တတိယအကြိမ် ပင်လုံညီလာခံကို ဒီဇင်ဘာမှာကျင်းပပြုလုပ်ဖို့ ရည်မှန်းလုပ်ဆောင်နေပြီး ဒီအတောအတွင်းမှာ NCA ကောင်အထည်ဖော်မှု လုပ်ငန်းများကို ပြန်သုံးသပ်ကြဖို့ သဘောတူထားပါတယ်။
…………………. ။ ။ …………………….
ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျ သုံးသပျဖို့ သုံးပှငျ့ဆိုငျ ဆှေးနှေးမယျ
ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျနှောငျ့နှေးနတေဲ့အပိုငျးတှကေို သုံးသပျပွငျဆငျဖို့ အစိုးရ၊နိုငျငံရေးပါတီနဲ့ အပဈရပျတိုငျးရငျးသားတပျဖှဲ့ ၈ခုတို့ သုံးပှငျ့ဆိုငျဆှေးနှေးကွမယျလို့ အပဈရပျတပျဖှဲ့ခေါငျးဆောငျတဦးက ပွောပါတယျ။
အခုလကုနျပိုငျးမှာ ဆှေးနှေးကွမှာဖွဈပွီး အစုအဖှဲ့အားလုံးသဘောတူတဲ့အခကျြတှကေို ရှေးထုတျစုစညျးသှားမှာဖွဈတယျ၊ ပွညျထောငျစု ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးမှု ပူးတှဲ ကျောမတီ(UPDJC)အစညျးအဝေးလညျး ဆကျတိုကျကငျြးပပွုလုပျသှားဖို့ရှိတယျလို့လညျး ပွောပါတယျ။
အစိုးရက တတိယအကွိမျပငျလုံညီလာခံကို ဒီဇငျဘာမှာကငျြးပပွုလုပျဖို့ ရညျမှနျးလုပျဆောငျနပွေီး ဒီအတောအတှငျးမှာ အနျစီအအေကောငျအထညျဖျောမှုလုပျငနျးမြားကို ပွနျသုံးသပျကွဖို့ သဘောတူထားပါတယျ။
Previous articleချဲလ်ဆီးအသင်းမှာ မတည်ငြိမ်မှုဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကို နည်းပြကွန်တီ ငြင်းဆန်
Next articleသမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင့်ဆီက အာဏသိမ်းဖို့ လျှိုဝှက်ကြံစည်မှုတွေရှိခဲ့